Maareeyayaasha Mareykanka ayaa Kharibay ... | Martech Zone
Maareeyayaasha Mareykanka waa Kharibeen…
Khamiista, Oktoobar 20, 2005 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Maareeyayaasha Mareykanka ayaa Khasaaray. Qaarkood xitaa waa brats.
Bal qiyaas ka maamul jasiirad. Jasiiraddaadu way xadidan tahay ilaha aadanaha, saacado ayeyna ka maqnaayeen wax kasta oo waxaad ku hadlaysay luuqad kale. Soo jiidashada shaqaalaha jasiiraddaada way adagtahay luuqadda hooyo iyo jasiiradda awgeed. Jasiiraddu kuma jirto jihada bari ama Kariibiyaanka, waa qabow oo qoyan iyada oo bilaha qaarkood ay saacado bixiyaan oo keliya maalintii. Markay korayeen, shaqaalahaaga ayaa wax lagu baray inay kuhadlaan laba luqadood oo kale oo badal ah maadaama luuqadaada waxyar laga yaqaano meel ka baxsan jasiiraddaada
Maamule ahaan iyo xubin jasiirad ahaan, waa masuuliyadaada inaad udhaqaajiso shaqaalahaaga meela ay ku guuleystaan. Waa inaad si adag u shaqeysaa si aad u haysatid shaqaalaha; maxaa yeelay, in kasta oo ay tahay gurigoodii, way ka bixi karaan jasiiradda markasta oo ay jecel yihiin inay raacaan fursado kale. Waa inaad lacag badan gelisaa shaqaalahaaga mushahar iyo kheyraad labadaba. Shaqaale kasta wuxuu ku bilaabmaa 5 usbuuc oo fasax sanadkii ah. Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad dadka si dhakhso leh kor ugu qaaddo maxaa yeelay wareejinta shaqaalaha iyo ciilku waxay aasi karaan meheraddaada.
Jasiiraddu waa Iceland. Magaalada waa Reykjavik. Waa dal soo jiidasho leh. Dadkeedu waxay hodan ku yihiin dhaqanka, taariikhda, waxayna leeyihiin mid ka mid ah dhaqammada ugu caafimaadka iyo qanisan adduunka. Kalluumeysiga iyo dalxiisku waa warshadaha ugu sarreeya Iceland. Waxay leeyihiin cuntada ugu fiican adduunka. Jasiiraddu waxay hodan ku tahay astaamaha juqraafiyeed ee xiisaha leh, barafka, dhul-beereedka.
Shirkaddaydu waxay toddobaadkan u dirtay Iceland si ay u caawiso mid ka mid ah macaamiisheenna. Laga soo bilaabo markii aan soo degnay, cabsi ayaan ku jirnay. Dhaqanka ururka, hufnaanta iyo hufnaanta shaqaalaha ayaa aad uga duwanaa shirkad kasta oo Mareykan ah oo aan waligey la soo shaqeeyey. Xaqiiqdu waxay tahay, waxaan u maleynayaa inaan halaagnay.
Ameerika gudaheeda, haddii aadan jecleyn shaqaalahaaga si fudud waad u eryi kartaa, weydiisan kartaa inay baxaan, ama waxay ku siin kartaa raaxo la'aan ku filan inay baxaan. Haddii aysan wax soo saar lahayn, uma baahnid inaad dalbatid ilaha si fudud mid cusub u hesho. Wax soo saarkeenna ummaddan waa mid caan ka ah adduunka oo dhan laakiin maahan maareeyayaashayada waaweyn. Sababtu waa khayraadka badan ee aadanaha. Waxay ka dhigan tahay inaan u baahnayn inaan maamulno. Uma baahnin in aan wax hoggaaminno. Uma aragno shirkadda cimri dherer ahaan inay tahay hanti inta badan ay sii dheertahay shaqaaluhu la joogo shirkad; waxaan ku bartilmaameedsanaa daciifnimadooda.
Macmiilka aan booqannay waa ganacsi faa'iido ku leh warshad caalami ah oo ficil ahaan meel kasta oo kale ka socota. Waxay la kulmaan caqabado ka badan kuwa aan la kulanno. Xaqiiqdii, tartamayaasha dalkeenna ayaa musalaf ku noqon kara qayb ka mid ah qorshahooda ganacsi ee istiraatiijiyadeed! Waxay diiradda saaraan tayada, halka tartamayaasha ay diiradda saaraan qiimaha. Waxay leeyihiin xeelado fog, halka tartamayaashoodu ay ka walwalayaan qiimaha saamiga maanta. Noloshooda ayaa u baahan, wayna keenaan.
Dhinacyada oo dhan, dhaqankooda iyo dhibaatada ka haysata deegaankooda waxay dalbanaysaa inay noqdaan dad ka fiican kuwa ka ganacsada, ka ganacsiga wanaagsan, uguna badnaan, maareeyayaal wanaagsan. Markii aan fadhiisannay shirarkeennii aan la yeelannay daraasiin shaqaale ah, waan kala garan weynay kuwa safka hore ah iyo kuwa maamuleyaasha sare ah - dhammaantoodna waxay ahaayeen dad aqoon leh, u heellan, cod iyo hawl badan.
Xirfadeyda, waxaan la kulmay 1 ama 2 maamule oo laga yaabo inay awoodaan inay kula tartamaan jawigan. Nasiib darrose, kumanaanka kale ee aan la soo shaqeeyey shumac ma hayaan. Si aan daacad u ahaado, waxaan u maleynayaa inaan ka mid ahay kuwa dambe…. Ma hubo inaan sidoo kale halkaas ku guuleysan karo.
Maamulayaasheena waa khariban yihiin. Uma baahna inay maareeyaan, uma baahna inay la qabsadaan deegaanadooda waxay si fudud u beddelaan bay'ada si ay u qariyaan awooddooda hoggaamineed. Ganacsiyada qaarkood, wareejinta shaqaaluhu xitaa waa faa'iido maxaa yeelay waxay hoos u dhigi kartaa mushaharka. Qaarkood waxay aaminsan yihiin inay ka jaban tahay helitaanka shaqaale cusub halkii lagu sii hayn lahaa qof khibrad leh.
Nathan Myhrvold, oo ahaa Chief Chief Scientist, oo ka tirsan shirkadda Microsoft ayaa yidhi, "Kuwa soo saara barnaamijyada ugu sarreeya ayaa ka wax soo saar badan kuwa celcelis ahaan sameeya softiweerka oo aan ahayn boqolkiiba 10X ama 100X, ama xitaa 1,000X, laakiin 10,000X." Waxaan si cadaalad ah u hubaa in bayaankan lagu celin karo dhamaan ururada badankood. Xaqiiqdu waxay tahay - shaqaaleeyaha wanaagsan ma mudna dheeraad ah marka loo eego shaqaalaha kale, way mudan yihiin jibbaar ka badan.
Maaddaama adduunkeenu sii wado isdhexgalka, jasiiradeena way sii yaraanaysaa. Mareykanku hadda wuxuu noqonayaa macaamil suuqa adduunka mana guuleysan doonno illaa aan la xisaabtano maareeyayaashayada. Maxaa Iceland ka doonaya inay waxqabad samayso mustaqbalka dalkeena aad ugama fogayn. Shaqaalaheena wanaagsan iyo maamulayaashayada waxaa la wareegaya shirkadaha qiimeeya qiimahooda. Maareeyayaasha xunxun waxay ku fuulayaan shirkadahooda xun dhulka.
Tags: Americacaalamkadhaqaalaha caalamkaicelandcaalami ahmaamulkaTababaraha kooxdaadduunka